TONVA ọgwụ iji eyi akpịrị swab mmepụta extrusion igbu ịkpụzi igwe
Smart usoro abụọ ojii igbu ịkpụzi igwe bụ TONVA company'orignal imewe, ọ na-jikọtara haịdrọlik na pneumatic. Arụ ọrụ dị mma ma na-arụ ọrụ siri ike, ọ dị mfe ịrụ ọrụ, dị ọcha na ngwa ngwa. Kwesịrị ekwesị maka karama ọgwụ bottle ịsa karama bottle karama mmanụ 、 ihe egwuregwu ụmụaka verage ihe ọ、ụ、ụ karama 、 mkpọ ala wdg.
1. Ihe nlere a bu enweghị mmetọ, oke ọsọ, nkwụsi ike, nchekwa ike na ọnọdụ ziri ezi nke ịgbagharị. 2. A na-arụpụta igwe na-enweghị sistemụ hydraulic ma na-ejikwa usoro nchịkwa igwe na-eme ka ọ bụrụ ngwa ngwa na-akpụ akpụ ngwa ngwa na nzaghachi ngwa ngwa nke ike ike. Ya mere, gburugburu ebe obibi na-enweghị mmetọ na-ezute ihe achọrọ maka nkwakọ ngwaahịa ọgwụ. 3. Nrụpụta ọsọ ọsọ ma na-akwụsi ike nwere ike ịkarị puku iri kọmputa kwa ụbọchị. Na 40% ike nwere ike a ga-azọpụta tụnyere haịdrọlik usoro. 4. Ọhụrụ e mere n'ime Ọdịdị nke na-anwụ anwụ isi nke ọma emesi agbaze plastic gbadata ogologo na-enweghị ndiiche. Enwere ike ịchịkwa njehie ibu na gram 0.1. 5. Ọnụego nke okpu ngwaahịa nwere ike n'ụzọ dị irè lowered dị ka ọ dị mfe ma dị mfe ịmụta banyere igwe ukpụhọde na ọrụ.
Ngwaọrụ nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa igwe
1.Toggle clamping Ọdịdị enweghị sere-mkpanaka imewe nwere ọbụna na ike clamping ike na nnukwu ebu-gwara efere. 2.Bottle mgbidi ọkpụrụkpụ nke ọ bụla uji eze ka ọbụna na elu elu bụ ezigbo onye na imewe nke center nri anwụ isi, esichara site CNC igwe center. 3.Wel-arụ ọrụ hydraulic arụ ọrụ nke ọma, na ụdị mbubata, hụ na igwe na-agba stablv ma rụọ ọrụ nke ọma. 4.MOOG 100 Points Parison Control System nwere ike nakweere iji meziwanye ogo ngwaahịa. 5.This nlereanya nwere ike kwalite n'ime "ngwakọ Type", e ji ebu ihe nke akụkụ nke e mere na servo moto iji nweta dịghị mkpọtụ, mfe ọrụ, kpọmkwem ọnọdụ na ngwa center-elekwasị anya na ebu. 6.Machine nwere ike iji robot amm, onye na-ebugharị, onye na-enyocha mmiri, nyocha na-ebu, igwe nkwakọ ngwaahịa, wdg. Dịka ị chọrọ.
1.Multi laver co-extrusion bụ nhọrọ na pụrụ iche ekara eruba agba ọsọ n'ime ndị nwụrụ anwụ ọkọkpọhi edo ọkpụrụkpụ nke ọ bụla oyi akwa na ọkpụrụkpụ nke EVOH oyi akwa nwere ike na-achịkwa n'ime 0.03mm. 2.Toggle clamping Ọdịdị enweghị sere-mkpanaka imewe nwere ọbụna na ike clamping ike na nnukwu ebu-gwara efere. 3.Anwere ike ịgbakwunye ya na sistemụ hydraulic, usoro a na-ahụ anya, ogwe aka robot, onye na-ebufe, onye na-enyocha mmiri, igwe nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị ọzọ. 4.This nlereanya nwere ike kwalite n'ime "ngwakọ Type", e ji ebu ihe nke akụkụ nke e mere na servo moto iji nweta dịghị mkpọtụ, mfe ọrụ, kpọmkwem ọnọdụ na ngwa center-elekwasị anya na ebu.
1.Ihe Nlereanya a na-apụta dị ka ndị a: multi die head, double station and high production. Kalama ọkpụrụkpụ nke ọ bụla uji eze mere ọbụna na imewe nke center nri anwụ isi, esichara site CNC igwe center. 2.Machine na-eji akara ebubata maka akụrụngwa hydraulic ma were valvụ abụọ kwesịrị ekwesị iji chịkwaa ọsọ ọsọ na nrụgide nke mmanụ mmanụ nke nwekwara ike ijikwa na ntanetị. Mmeghari nke dị n’elu kwụsiri ike ma dịkwa mma. 3.MOOG 100 Points Parison Control System nwere ike nakweere iji meziwanye ogo ngwaahịa. 4.This nlereanya nwere ike kwalite n'ime "ngwakọ Type", e ji ebu ihe nke akụkụ nke e mere na servo moto iji nweta dịghị mkpọtụ, mfe ọrụ, kpọmkwem ọnọdụ na ngwa center-elekwasị anya na ebu. 5.Anwere ike ịmepụta igwe iji rụọ ọrụ na ogwe aka robot, onye na-ebugharị, onye na-enyocha mmiri, akara ngosi, igwe nkwakọ ngwaahịa, wdg. Dịka ị chọrọ.
1. “A” Series na-ọma etinyere na-emepụta iche iche iche iche nke igbu kpụrụ ngwaahịa, dị ka chemical drum, toolbox ụmụaka igwu toy, oche, na akpaaka akụkụ na pallet.Machine ike effortlessly echekwa ihe na a obere oge na imewe nke accumulator anwụ isi, yana iji sistemụ hydraulic na-ebubata, ọ na-agbasi ike karị ma na-aga n'ihu. Anyị na-ewepụkwa usoro nlekọta ngwa ngwa parison maka oke ngwaahịa nke ngwaahịa. 2. Number nke n'ígwé: 1 oyi akwa 3 n'ígwé. 3.Clamping Structure: Atọ-efere na mmasị ogwe aka abụọ esiri-mkpanaka ọrụ ọnụ na clamping structure.Efere bụ nnukwu iji jide nnukwu-sized ebu na ebu oghere & mmechi-arụ ọrụ stably. Ngbanwe kachasị dị mkpa abụghị ụzọ ịpụta.